China CZU သံမဏိ purlin frame roll စက်ကိုစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ | မင်းရဲကျော်စွာ
CZU သံမဏိ purlin ဘောင်လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
အာမခံချက် -၁၂ လ
ပစ္စည်းသံမဏိကွိုင်, သွပ်သွင်းခြင်း, PPGI, Aluminum
အမြန်နှုန်း:၆-၈ မိနစ် / မိနစ် (လက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပါအဝင်)
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်Panasonic / Mitsubishi PLC
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား:200 အစုံ / တစ်နှစ်
Supply နိုင်ခြင်း:200 အစုံ / တစ်နှစ်
လက်မှတ်:CE / ISO9001
C / Z /ဦး Purlin လိပ်ပုံစက်
စက်တစ်ခုသည်ကွဲပြားသော C / Z Purlins များကိုရိုးရှင်းသော manual stepless ညှိနှိုင်းမှုမှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ မတူညီသော profiles များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ထုတ်လုပ်ရမည်၊ roller များပြောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ စက်တွင်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သည့်ပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် purlin ၏အရှည်၊ ပုံတူအပေါက်အကွာအဝေး၊ အရေအတွက်စသည်တို့ကို အခြေခံ၍ အလိုအလျောက်ထိုးနှက်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု Decoiler - အစာကျွေးရန်လမ်းညွှန် - အဓိကလိပ်ပုံစက် - PLC Contol System - ဟိုက်ဒရောလစ်ကန် - ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း - ရလဒ်ဇယား
ကိုက်ညီသောပစ္စည်း သံမဏိကွိုင်၊ သွပ်သွင်းခြင်း၊ PPGI, Aluminum
ဖွဲ့စည်းမြန်နှုန်း 6-8m / min (လက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအချိန်ပါဝင်သည်)
roller အရေအတွက် ၁၈ နှစ်လောက်
ရိုးအချင်းနှင့်ပစ္စည်း 70mm, ပစ္စည်း 40Cr ဖြစ်ပါတယ်
roller ပစ္စည်း chromed နှင့်အတူ 45 # သံမဏိ
ဗို့အား 380V / 30Phase / 50Hz
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁၀ တန်ခန့်ရှိသည်
စက်၏အရွယ်အစား L ကို * W * H ကို 10m * 1.2m * 1.6m
YINGYEE MACHINERY AND TECHNOLOGY SERVICE CO ။ , LTD
YINGYEE သည်အအေးခံစက်အမျိုးမျိုးနှင့်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတွင်အထူးပြုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆက်စပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသောအလွန်မြင့်မားသောနည်းပညာနှင့်အလွန်ကောင်းသောအရောင်းများပါ ၀ င်သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဖွဲ့ရှိသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအရေအတွက်ကိုဂရုပြုပြီး ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကောင်းမွန်သောပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုများပေးခဲ့သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပြီးနောက်တွင်အသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအသင်းရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းပြီးမြောက်ရန်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အနေဖြင့်ပြည်ပသို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ပြီးပါပြီ။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်သို့ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နှင့်ဂျာမနီတို့ပါ ၀ င်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်:
စက်ပုံဖော်စက်များဖြင့်လှည့ ်၍ ရသောတံခါးကုန်း
C နှင့် Z purlin လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
အလင်း Keel Roll စက်ဖွဲ့စည်း
2. QT စာမေးပွဲကိုကြိုဆိုပါတယ်။
၁။ နည်းပညာအဆင့်အတန်း၊ ISO ထုတ်လုပ်သည့်လက်မှတ်နှင့်ကိုက်ညီပါ
2. CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
3. ပေးပို့ပြီးနောက် 12 လအာမခံ။ ဘုတ်အဖွဲ့။
စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအတွက်စံပြ C / Z Purlin Frame Roll ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အရာအားလုံးကို C / Z / U Purlin လုပ်စက်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံမှ C / Z Light Gauge Purlin ပြုလုပ်သည့်စက်ရုံဖြစ်ပါသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ - C / Z / U Purlin ပြောင်းလဲနိုင်သောအလိပ်စက်
ရှေ့သို့ မှိုဖြတ် downpipe လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
နောက်တစ်ခု: Hot Sale လျှပ်ကူးပစ္စည်းကာဗွန်သံမဏိဂဟေဆော်ခြင်း
စက်ကို Forming ကို C Purlin Roll
Purling Roll Forming စက်
ဦး Purlin လိပ်ပုံစက်
Gear drive အလိုအလျောက် C / Z purlin လိပ် ...
Purlin Roll သည် C / Z 100-300mm အတွက်စက်ပုံစံ
1-3mm သံမဏိသတ္တုချည်မျှင်တိုင်များ purlin ကိုလှိမ့်စက်
C / Z Purlin အအေးခံစက်
ထုတ်စက်ကို C purlin လိပ်ထုတ်နှစ်ဆ
စက်ဖွဲ့စည်းအလိုအလျောက်က c purlin လိပ်